MAQAAL:- Haanta Qabyada ah. W/Q: Ustaadka Ummadda. | Monday, January 23rd, 2017	Home
MAQAAL:- Haanta Qabyada ah. W/Q: Ustaadka Ummadda.
Jan 6, 2017 - jawaab	Asc:- Haanta Qaybyada ah:
” Ustaadka Ummadda siddaad ku barateenba waa Qalinka Ummadda, waanna lagama maarmaan innuu u bidhaamiyo shacab kiisa fasirka dadban iyo ujeedka dadban ee ku hoos jira qabyo “……..